अयोध्या फैसलामा मुसलमान र पाकिस्तान असन्तुष्ट, भारत हिन्दु राष्ट्र बन्न लागेको आरोप
नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादमा हिन्दुहरुको पक्षमा फैसला सुनाएपछि मुसलमान समुदाय असन्तुष्ट बनेको छ ।
मुसलमान समुदायका नेताले आफूहरुलाई पाँच एकर्ड जमिन समेत नचाहिँने बताएका छन् । अदालतको ओदशपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरुले यो आदेशलाई खारेज गरिदिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
अदालतको फैसलाले भारत हिन्दु राष्ट्र बन्ने तर्फ अघि बढेको संकेत गरेको मुसलमान समुदायका नेताको आरोप छ ।
भारतीय सर्वेाच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबारे पाकिस्तानले समेत प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता आसिफ गफ्फुरले सामाजिक सञ्जाल ट्विट मार्फत भनेका छन्, 'दुनियामा एक पटक फेरि अतिवादी भारतको असली अनुहार उदाङगिएको छ । पाँच अगस्टमा कश्मीरको संवैधानिक दर्जा भारतले खारेज गर्यो र आज बाबरी मस्जिदबारे फैसला आएको छ । अर्कोतर्फ पाकिस्तानले अरुको धर्मको सम्मान गर्दै गुरु नानकको सेवकका लागि करतारपुर करिडोर खुला गरेको छ ।'
रेडियो पाकिस्तानसँगको कुराकानिमा पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले अयोध्या फैसलामा मोदी सरकारको कट्टरता झल्केको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतमा मुसलमान पहिलेदेखि दबावमा छन् र सर्वोच्चको फैसलाले थप दबावमा पर्नेछन् ।’
पाकिस्तानका वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीरले ट्वीट मार्फत यस्तो लेखेका छन् ।
त्यस्तै पाकिस्तानको समा टिभिका वरिष्ठ पत्रकार नदीम मलिकले पनि ट्विट गरेका छन् ।
Babri Mosque: India's Supreme Court inacontroversial order has given the ownership of the 2.77 acres site in Ayodhya to Hindus for the construction ofatemple. The 460-year-old mosque was demolished in 1992 by extremist Hindus. Muslims to get5acres at an alternative site.
— Nadeem Malik (@nadeemmalik) November 9, 2019
भारत स्थित सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले अदालतको फैसलामा न कसैको जित न त हार भएको भन्दै शान्ति र सद्भाव कायम राख्न अपील गरेका छन् ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले शनिबार बिहान फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएका हुन् ।
आदेशमा अहिले विवाद भएको ठाउँमा मन्दिर बनाउन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २,७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विटगरेका थिए ।
हिन्दुहरुको पक्षमा फैसला आएपछि मोदीको ट्विट
मोदीले दिए इमरान खानलाई धन्यवाद